Rajesh Koirala » 2011 » June
देखेपछि माया मोह
‘नदेखे त को हो को हो ? देखेपछि माया मोह’ भनेझैं हुन्छ, डगलस हललाई । पाँच वर्ष नेपालमा पिसकोर स्वयंसेवक रहेका डग हल अमेरिकाभर नेपालीभाषीको सेवामा लागेका छन् । यहि त रहेछ, माया मोह भनेको । डगलसलाई छोटकरीमा ‘डग’ मात्र भनिन्छ ।
उनले छापेको ‘नेपाली-अंग्रेजी-नेपाली डिक्सनरी‘ अमेरिकामा भएका नेपालीभाषीका लागि निकै सहयोगी बनेको छ । नेपाली भनेपछि हललाई निकै माया लाग्छ, यो मैले बुझेको छु । यो माया यसपटकको वनभोजमा पनि देखियो । उनले नेपालीभाषी भेला पारेर वनभोज गर्ने गरेका छन् । हलको आयोजनामा भएको यस वर्षको तेस्रो रहेछ, यो वनभोज ।
नेपाली चलनमा वनभोज खोलाकिनार जाने, पकाउने, खाने, रमाइलो गर्ने हो । पहिलो यहाँ खुल्ला ठाउँमा गएर मनोरञ्जन गर्दा सुरक्षामा ध्यान दिइन्छ । दोस्रो, सामान्यत घर र वरपरकै क्षेत्रफल प्रशस्त हुने हुनाले बाहिर जानै पर्ने अवस्था पनि हुन्न । त्यसैले हलले आफ्नो घरपछाडिको खाली ठाउँमा वनभोज गर्ने निधो गरेर थालेछन्, वनभोज ।
अमेरिकाका माथिल्लो भेकमा राज्यहरुमा हिउँ पर्छ । हिउँ पर्ने ४-५ महिनाका दिन छोटा हुन्छन् । काम र घर गर्दैमा बाहिर गरिने मनोरञ्जन शुन्य हुन्छन् । वसन्त ऋतु (स्प्रिङ) अनि गर्मी लागेपछि चहलपहल शुरु हुन्छ र नोभेम्बरमा ‘थ्याङ्स गिभिङ’ नआउन्जेल भेटघाट र मासु पोली खाने (बार्बिक्यू) काम चलिरहन्छ । यहि सन्दर्भमा हलले वनभोजको कार्यक्रम राख्छन्, वर्षेनि ।
ए हजुर ! यता पनि फुल्दोरहेछ, गुराँस
हिउँद सकिएर वसन्त लागेपछि फूलहरु फुले । यीनै फूलहरुमा गुराँस पनि देखियो, अमेरिकामा । मेरा लागि निकै रमाइलो कुरा भयो, ‘अहो ! गुराँस पनि त फुल्दोरहेछ ।’ जताततै गुराँसै-गुराँस ।
नेपालको राष्ट्रिय फूल ‘लालीगुराँस’ पढेको अनि जानेको थियो । नारायण गोपालको गीत सुनेको र गुनगुनाएकै हो :
“म त लालीगुराँस भएछु, म त लालीगुराँस भएछु,
वनैभरि फुलिदिन्छु, मनैभरि फुलिदिन्छु,
म त लालीगुराँस भएछु …………………
फाँटहरुले कसलाई पुग्छ, भिरमा पनि फुलिदिन्छु,
खुसी मात्र कहाँ हुन्छ, खुसी मात्र कहाँ हुन्छ,
पीरमा पनि फुलिदिन्छु
म त लालीगुराँस भएछु, म त लालीगुराँस भएछु”
ओल्गा मुर्रे सानो छँदा
ओल्गा मुर्रे नेपाली बालबालिकालाई माया गर्ने अमेरिकी हुनुहुन्छ । उहाँलाई ‘ओल्गा दिदी’, ‘ओल्गा ममी’ भनेर चिनिन्छ । उहाँले ‘नेपाल युथ अपर्च्युनिटी फाउन्डेसन’को स्थापना गर्नुभएको छ । उहाँ संस्थाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ । फाउन्डेसनले बालबालिका र युवाका लागि काम गर्दै आएको छ । ओल्गा सन् १९२५ जुन १ मा रोमानियाको ट्रान्सिलभानियामा जन्मनुभएको हो । ओल्गाका पिताको नाम जोसेफ र माता माटिल्डा हो । उहाँले कोलम्बिया विश्वविद्यालय (सन् १९४९) मा राजनीतिकशास्त्र पढ्नु भयो । जर्ज वासिंगटन विश्वविद्यालयको ल स्कुल (सन् १९५४) बाट कानुनमा स्नातक (बिएल) गर्नुभयो । उक्त स्कुल पढ्ने थोरै छात्रा थिए । त्यसबेला महिलालाई वकिल हुन गाह्रो थियो । उहाँ क्यालिफोर्निया राज्यको सर्वोच्च अदालत पुग्नुभयो । उहाँलाई प्रधानन्यायाधीश फिल गिब्सनले अनुसन्धान गर्ने वकिलको काम दिनुभयो । उहाँले मानवअधिकार, महिलाअधिकार र वातावरण संरक्षणबारे महत्वपूर्ण फैसलामा सहयोग गर्नुभयो । उहाँ सन् १९८४ मा पहिलोपटक नेपाल जानुभयो । पोखराबाट घुम्दै सिकलेसको पुग्नुभयो । सन् १९८५ र १९८७ मा फेरि नेपाल जानुभयो । बालबालिकाको अवस्था नराम्रो देख्नुभयो । सन् १९९० मा उहाँले फाउन्डेसनको स्थापना गर्नुभयो । अहिले उक्त फाउन्डेसनलाई ‘नेपाल युथ फाउन्डेसन’ मात्र भनिन्छ । ३७ वर्ष अदालतको सेवा गर्नुभयो । उमेर पुगेर सन् १९९२ मा काम छाड्नुभयो । उहाँले पश्चिम नेपालका कमलरी मुक्तिका लागि काम गर्नुभएको छ । ओल्गाले सन् २००१ पछि धेरै सम्मान पाउनुभएको छ । धेरै देश घुम्नुभएको छ । ओल्गा ६/६ महिना नेपाल र अमेरिका बस्नुहुन्छ । यसपटक ओल्गाका बाल्यसम्झना :
कुलचन्द्र गौतम सानो छँदा
कुलचन्द्र गौतम विश्वभरका बालबालिकाको हितमा काम गर्ने नेपाली हुनुहुन्छ । उहाँले लामो समय संयुक्त राष्ट्रसंघमा काम गर्नुभएको छ । राष्ट्रसंघमा सबैभन्दा माथिल्लो ओहदामा पुग्ने उहाँ एक नेपाली पनि हुनुहुन्छ । उहाँको जन्म गुल्मी जिल्लाको अमरपुर गाउँमा २००६ साल मंसिर ६ गते (सन् १९४९) भएको हो । उहाँका पिताको नाम ओमप्रसाद र माताको नाम हिमा गौतम हो । उहाँ पहिलो सन्तान हो । उहाँहरू ३ भाइ र ४ बहिनी जन्मनु भएको हो । स्कुलको पढाई सकेपछि सिधा सम्पर्कबाट अमेरिका पढ्न जान खोज्दा उहाँले पासपोर्ट पाउनु भएन । एक वर्ष काठमाडौं बस्नुपर्‍यो । त्यो बेला उहाँले काठमाडौंको त्रिचन्द्र कलेजमा पनि पढ्नुभयो । पढाई खर्च जुटाउन अमेरिकी सहयोग नियोग (युएसएआइडी) का विभिन्न सामग्री अनुवाद गर्नुभयो । एक वर्षपछि सहसचिव दीर्घराज कोइरालाको मद्दतले उहाँ अमेरिका आउन पाउनु भयो । सन् १९६८ सेप्टेम्बरमा अमेरिकाको न्यू ह्याम्सर राज्यको डार्मोथ कलेजमा आएर पढ्नुभयो । त्यहाँ पढ्न आइपुग्ने उहाँ पहिलो नेपाली विद्यार्थी हुनुहुन्थ्यो । प्रिन्स्टन र हार्भर्ड युनिभर्सिटीमा पढ्नुभयो । भियतनाम युद्धप्रतिको चासो र त्यसपछि युद्धविरामका लागि भएको पेरिस सम्झौताले उहाँलाई राष्ट्रसंघप्रति आकषिर्त गर्‍यो । उहाँले सन् १९७३ मा राष्ट्रसंघमा प्रवेश गर्नुभयो । संघमा उहाँलाई राष्ट्रसंघीय बालकोष (युनिसेफ) मा खटाइयो । भियतनाम जानुभयो । त्यसपछि संघका लागि निरन्तर काम गर्नुभयो । गौतमले कम्बोडिया, हैटी, ल्याटीन अमेरिकी तथा क्यारिबियन देशहरू, लाओस, भारत आदिमा पुगेर काम गर्नुभयो । बालकोषका कार्यकारी निर्देशक हुनुभयो । सन् २००७ डिसेम्बरमा संघबाट सेवानिवृत्त हुनुभयो । उहाँ अहिले धेरै सामाजिक संस्थामा रहेर काम गर्नुहुन्छ । विश्वका धेरै देश पुगेका गौतमले विश्व चर्चित सम्मान पाउनुभएको छ । उहाँ २०६७ साउनदेखि प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार हुनुहुन्छ । राष्ट्रसंघ महासभा अध्यक्षमा उहाँलाई नेपालले उम्मेद्वार बनाएको छ । यसपटक गौतम सानो छँदाका केही सम्झना :